Tontolo : Ny Fisoloàn-toerana An’i Moreno Ocampo Ao Amin’ny Fitsarana Iraisam-pirenena Ho An’ny Ady Heloka Bevava · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Novambra 2011 2:06 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Svenska, Français, Español, English
Tonga amin'ny fetra farany ny fotoana ipetrahan'i Luis Moreno Ocamp amin'ny maha mpampanoa lalànan'ny Fitsarana Iraisam-pirenena ho an'ny Ady Heloka Bevava. Ny fifidianana mpitsara dia voalahatra ho amin'ny andiany fahafolon'ny Fivoriamben'ireo Firenena mpikambana hatao ao amin'ny Foiben'ny Firenena Mikambana ny 12-21 Desambra 2011.
Koa iza ihany ary no mety hisolo an'i Luis Moreno Ocampo eo amin'ny toeran'ny Mpampanoa lalànan'ny ICC na ny Fitsarana Iraisam-pirenena ho an'ny Ady Heloka Bevava? Hatramin'ny fotoana nanoratanay, ny mpifaninana mitarika dia ilay mpampanoa lalàna lefitra avy any Gambia Fatou Bensouda.
Kandidà hafa mpandray anjara :
… Andrew Cayley, mpampanoa lalàna ao amin'ny tribonalin'i Khmer Rouge ao Kambodza izay avy any Angletera; Filohan'ny fitsarana Tanzaniana Mohamed Chande Othman; ary i Robert Petit, mpanolotsaina ao amin'ny Departemantan'ny fitsarana ao Kanada momba ny heloka fanitsakitsahana ny maha-olombelona sy ny heloka an'ady
Ny efitranon'ny"ECCC"ny 20 Jolay 2009 nandritry ny fijoroana vavolombelon'i Him Huy, ilay Khmer Rouge mpiandry fonja fahiny. Sary natolotry ny Extraordinary Chambers ao amin'ny fitsarana ao Kambodza
“Ireo efatra ireo dia mety ho fanatsarana daholo,” hoy i Joshua Rozenberg avy ao amin'ny Fitsarana Mandray Andraikitra ao amin'ny BBC dia nanoratra ho valin'ny fanontanian'ilay mpanoratra :
@JoshuaRozenberg: @efleischer ireo efatra ireo dia mety ho fanatsarana daholo. Rehefa sainina, na iza na iza dia mety ho mendrika avokoa.
Ary saika mifanipaka amin'ny fandàvan'i Rozenberg izany, i Bensouda izy tenany mihisty. Tao aminà fanadihadiana niaraka tamin'i “Global Observatory”, namafisiny ilay hevitra milaza hoe avelao ny fitsarana ho fitsarana :
Mihevitra aho fa ny tohan-kevitra lehibe indrindra mba tsy hanavaozana na hanovàna zavatra dia, farafahakeliny ny famelàna ny fitsarana hihodina tsara, avelao izy hiezaka sy hanandrana sy hitsapa ny lafiny rehetra amin'ny sata fototra ijoroantsika izay narahantsika, alohan'ny hanovàntsika azy.
Tamin'ny fanatràrana ny fiarahamonina anaty aterineto izay liana manokana amin'ny ny Fitsarana Iraisam-pirenena ho an'ny Ady Heloka Bevava, Jesse Loncraine avy amin'ny “IJ Central”, Fikambanan'ny mafàna fo naorin'ny Skylight Pictures, nanoratra hoe :
Raha i Bensouda izany ny haka ny toerana, dia manampoiza fomba firoson'ny niharam-pahavoazana.
Ary ilay hevitra momba ny “fomba firoson'ny niharam-pahavoazana” dia miseho farafahakeliny ao amin'ilay fanadihadihana niaraka tamin'ny The Global Observatory :
Mila mahamarika ihany koa ianao fa ny ICC no Fitsarana Iraisam-pirenena ho an'ny Ady Heloka Bevava voalohany namorona izany ary koa mba nandray an-tànana ny fandraisan'anjaran'ireo niharam-pahavoazana. Ny maro amin'izy ireo dia vokatry ny zava-nitranga tao amin'ny tribonaly hamehana niaraka tamin'ny fahatsapan-tenan'ireo niharam-pahavoazana ho tsy nisy mpanampy, sy ho toy ny haingon'entana fotsiny ihany, efa zatra ny mijoro vavolombelona izy ireo kanefa rehefa tonga ny fotoana handraisan'izy ireo anjara, hitondra ny fomba fijeriny sy ny momba azy, amin'ny fitadiavana onitra any amin'ny farany, dia tsy tanteraka izany. Nitranga tao amin'ny ICC izany. Ary koa, manome ohatra aho amin'ireo fitsarana izay nisy hatreto ary ny hafanam-pon'ireo niharam-pahavoazana tamin'ireny fitsarana ireny.
Tsy asan'ny biraon'ny mpampanoa lalàna izany, mazava ho azy, ny miandraikitra ny resaka onitra. Fa an'ny mpitsara, ary izy ireo ihany no manapa-kevitra ny amin'izay hanapahan'ny hevitra, ary ny vola omena ireo niharam-pahavoazana dia avy amin'izy ireo. Nefa ny zavatra izay nataontsika avy aty amin'ny biraon'ny mpampanoa lalàna dia ny nijery ny fomba hampifandraisana ny zava-misy afaka manampy antsika tsirairay avy.
Tany aloha dia efa namoaka tatitra ny Global Voices mikasika ny ezaka hitondrana ilay Praiministra Thailandey teraka tany Angletera ho any amin'ny Fitsarana Iraisam-pirenena ho an'ny Ady Heloka Bevava, ireo Keniana nikarakara hetsika ho fanohanana ny ICC ( na mandefa SMS ny fifidianany mba hamonjena olona ahiahiana), ny tontolon'ny bilaogy Sodane dia naneho hevitra mikasika ilay didy fampisamborana an'i Omar al-Bashir (toy izany ny eto), ireo bilaogera Afrikana naneho hevitra momba ny fisamborana an'i Karadžić , ny fitsarana an'i Charles Taylor tao amin'ny ICJ ary ny maro hafa
Isan'ny olan'ny fifampiresahana aminà ” institution” iraisam-pirenena ny fanombohana ny asa amin'ny fananganana fifanakalozan-dresaka itambaram-be manodidina izany ; tanaty fanaovana dia miverina sy ho famaliana ny fanontaniana mikasika ny heviny momba ny fitsarana, Ahron Young, ilay Talen'ny Biraon'ny Sky News ao Melbourne, dia manoratra hoe :
Manaiky aho fa mila manao zavatra ny olona any amin'ireo firenena feno kolikoly ary ny ICC dia manome farafahakeliny fanantenana hoe misy zavatra azo atao.
Jahanzaib Haque, mpamoaka lahatsoratra anaty vohikala ho an'ny The Express Tribune, dia manoratra hoe :
Tsy manana hevitra mafonja momba ny ICC aho, fa matoky kosa ny fitsarana tsy voafetran-tsisintany aho, ary ny ICC dia dingana (tsy manjary) tsy maintsy atao eo amin'ny làla-mahitsy mankany aminà fisiana fiainana miray, mifangaro ary natao ho an'ny rehetra.